Bulgaria is resort zithandwa zwe, ngakho njalo ngonyaka izinkulungwane zabantu baseRussia hamba lapho ukuphumula okuhle, njengokungathi sijabulela indawo enhle amahle sezulu evumayo. A imfanelo esiyisibopho iliphi iholide kubhekwa ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo ngokwakho, abangane nomndeni. Ngakho-ke, zonke izivakashi uya resort okokuqala, abanesifiso umbuzo yini kulethwa eBulgaria. Phela, kungafiseleka, ukuthi isipho kwakungelona trinket nje, futhi njalo ukukhunjuzwa kulelizwe libalele futhi basamukela.
Ekuqaleni, kudingeka sinake zobumba Bulgarian. Lolu hlobo mkhiqizo ijwayelekile eziningi kusukela nenkathi yamaSoviet, imikhiqizo yanamuhla akuzona eliphansi in izinga futhi samuntu amasiko wezwe. On umbuzo ukuthi elilethwa eBulgaria, izivakashi eziningi ebona uzokuphendula: "Ceramics". Izimbiza, lokunyenti, ngabe tinkomishi, amapuleti, ushukela, wayithela ezitsheni; usawoti nabahamba bayisipho esikhulu futhi Uyokhunjuzwa resort.
Cishe akunakwenzeka ukuthi ubulili fair uzokwazi ukubuyela ekhaya ngaphandle isitsha sokhuni uwoyela rose. Eduze nedolobha EKazanlak iseningizimu Rose Valley - endaweni lapho entwasahlobo uya Rose Festival. Izivakashi uphiwa hhayi kuphela amabhodlela lamafutha, kodwa futhi amakha phezu isizinda isigcebe sembali yayo ujamu.
Yini ukuletha eziyisikhumbuzo eBulgaria ukuba amadoda? Yiqiniso, ugologo - lendawo izithelo likagologo. Ngokuvamile esenziwe plums, kodwa kuyenzeka futhi amagilebhisi, lihhabhula, pere, ibhilikotsi ,: Peach, Cherry nezinye rakia ezenziwe ekhaya wathola amandla kuze kube degrees 60, futhi esitolo -. 40 degrees. Popular isiphuzo Bulgarian Uphinde abhekwe aniseed mastic, inqaba esikwaziyo degrees 50.
Futhi baletha abesifazane eBulgaria? Yiqiniso, nendwangu. Grinders ukuthengisa eliphezulu ngezandla izinto eziyizikhumbuzo baseYurophu uyayithanda kakhulu, ngakho-ke kusuke kukufanelekele okuseduzane. Lapha ungakwazi ukuthenga amakhethini, amashidi, zokudla kuhlanzekile yini, amahembe, amathawula, amathawula Folk efekethisiwe. Ungase futhi ukuthenga Bulgarian imvunulo yesizwe, nakuba kubiza kakhulu.
Yini ongayenza abuyise eBulgaria ikholwa? Ngokuqinisekile, ukulingisa ehlukahlukene ezenkolo, izimpawu nezinhlobo ezahlukene iziphambano nezimpawu. Yizwe Orthodox, ngakho ngokuvakashela uhambo ezindaweni ezithile zenkolo, kungenzeka nje kuphela ukubona izinto eziningi ezithakazelisayo, kodwa futhi ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo. Ngezinye izikhathi izivakashi uncamela aphathe izihlobo zabo nabangane ukudla kwamanye amazwe. Lokho kuthiwa amazwe eBulgaria avame? Lokhu injabulo Turkish, lathathwa abaseTurkey, kodwa oshintshwa iresiphi sakhe. Futhi okudume kakhulu "sharena usawoti" kuyinto usawoti exutshwe seasonings. Kuwufanele ukuthenga kimion - isinongo Bulgarian, efanelekayo zonke izitsha inhlanzi, inyama kanye nemifino.
Njengoba izwe idume yayo zokungcebeleka Black Sea nazo ezithengisiwe ukukhuthalele ukuthenga zonke izinhlobo amabhokisi, izikebhe, nezilwane kancane funny eyenziwe amagobolondo amatshe. Bulgaria - lokhu kuyinto izwe amazing kanye ukunambitheka wayo ongenakulibaleka, ukuze wonke eziyisikhumbuzo amazwe uzonikhumbuza, izinsuku sunny ujabule wachitha ogwini.
Gqamisa San Francisco - Golden Gate Bridge
Yenza Batter esiphundu, ukukhanya kanye ezinoshukela izinkukhu
Ukuhumusha kanye ukubaluleka Taro: "Ababili Pentacles" abaqotho
Ducane imayonnaise - sauce akufanele alimaze sibalo